ईश्वर पोखरेलले नै बुझेनन् बढुवा भइयो कि घटुवा ! – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित २९ आश्विन २०७७, बिहीबार १३:२३
२९ असोज, काठमाडौं । रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय’ मा खटाइएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको इमान–इज्जतमा बढोत्तरी भएको हो ? वा उनी किनारामा धकेलिएका हुन् ? बुधबारको मन्त्रिपरिषद हेरफेरपछि यो प्रश्न चर्चाको शिखरमा छ ।